Yintoni iWebraping Scraping? 5 Izindlela ezivela kwi-Semalt Ukukhusela iWebhu yeSayithi engekho mthethweni
I-Web scraping, eyaziwa nangokuvuna iwebhu, ukukhangela kwesikrini okanye idatha yewebhu ukukhutshwa, iteknoloji ekunceda ukuququzelela kunye nokukhipha idatha kwiwebhusayithi enye okanye ngaphezulu. Ungatshintsha ii-URL ezahlukeneyo kwaye uwasebenzise ngendlela yeefayile zeCSS, JSON, REGEX, kunye ne-XPATH. Ngoko, ukukhwa kwewebhu yinkqubo enzima yokuqokelela ulwazi ngokuzenzekelayo ukusuka kumnatha. Iiprogram ze-intanethi zokucoca kunye nezisombululo zivela kwi-ad hoc ukuya kwiinkqubo ezizenzekelayo ezikwazi ukuguqula yonke iwebhusayithi okanye iiblogi zibe ngolwazi olufanelekileyo nolungileyo.
Izindlela zokuthintela ukucinywa kwewebhusayithi engekho mthethweni:
I-webmaster ingasebenzisa imilinganiselo eyahlukeneyo yokunciphisa okanye yokumisa i-bots eyingozi. Izindlela ezibalulekileyo kakhulu zichazwe ngezantsi:
1. Vimba idilesi ye-IP:
Kufuneka uvalise i-spammers idilesi ye-IP ngesandla okanye ngezixhobo ezithembekileyo.
2. Khubaza ii-API zeenkonzo zewebhu:
Kuhle ukukhubaza ii-API zeenkonzo zewebhu ezingabonakaliswa ziinkqubo. Iibhothi ezisetyenziselwa izixhobo ze-arhente zingavinjelwa ngale ndlela ngaphandle kwengxaki.
3. Ukujonga indlela yakho ye-intanethi:
Kubalulekile ukuba sonke siphendule i-traffic web kunye nomgangatho wayo. Ukuba awuzange usebenzise iiNkonzo ze-SEO kwaye usaphila inani elikhulu leembono, usenokuba uthatyathwe ngothutho.
4. Usebenzise i-captcha:
. Ngokuqhelekileyo, i-bots ayikwazi ukufumana isicatshulwa ebhaliwe kwi-captcha kwaye ayikwazi ukuphendula loo mingeni. Ngale ndlela, unokufumana i-traffic kuphela kwaye ulahleke i-bots.
5. Iinkonzo zokulwa neengcambu zentengiso:
Inani elikhulu leenkampani linikeza iinkqubo ze-antivirus kunye ne-anti-bot. Zineenkcukacha zokulwa ne-anti-scraping kwi-webmasters, iibloggers, developers, kunye neenkqubo. Unako ukufumana nayiphi na le nkonzo ukukrazula i-web scraping engekho mthethweni.
Izindlela ezimbini ezahlukeneyo zokusebenzisa i-web scrapers kwi-intanethi:
Nge-web scraper, unokukwazi ukwakha i-sitemaps ngokukhawuleza uphinde uhlole isayithi ukukhangela idatha enentsingiselo.
1. Imveliso ye-scrape kunye namaxabiso:
Kuye kwabonakaliswa ukuba ukuphuculwa kwentengo kunokunceda ukuphucula umgama osemgangathweni wenzuzo ngamashumi amabini ukuya kuma-. Emva kokuba iimveliso kunye namaxabiso sele akhankanywe, kuya kuba lula kuwe ukuba ukwazi ukukhula kwishishini lakho kwi-intanethi kunye nendlela yokuthengisa inani eliphezulu lemveliso kunye neenkonzo. Le ndlela isetyenziswa kakhulu kwiiwebhsayithi zokuhamba, iinkampani ze-e-commerce kunye namanye amashishini afana ne-intanethi.
2. Ukulandelela ubukho bakho kwi-intanethi ngokulula:
Kubaluleke kakhulu kunye nenjongo ebalulekileyo yokutshitshiswa kwewebhu apho iingxelo zoshishino kunye nokuhlolwa kweziza zitshitshiswa. Isetyenziswe ukujonga ukusebenza komkhiqizo othile okanye inkonzo, ukuphendula nokuziphatha kwabasebenzisi, kunye nekamva le shishini. Isicwangciso sokuqhafaza lewebhu sinokukunceda ukwenza uluhlu kunye neetafile ngokusekelwe kwiingxelo zabasebenzisi kunye nokuhlaziywa kwezoshishino Source .